ဤလောက၏မကောင်းမှုပြဿနာ - Worldwide Church of God Switzerland
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2017-01 > ဒီလောက၌ဒုစရိုက်၏ပြဿနာ
လူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်ခြင်းမှ လှည့်ထွက်ရသည့် အကြောင်းရင်းများစွာရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ထူးခြားထင်ရှားသော အကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာ “မကောင်းမှုပြဿနာ” ဖြစ်သည်—ဓမ္မပညာရှင် Peter Kreeft က “ယုံကြည်ခြင်း၏အကြီးမားဆုံးသောစမ်းသပ်မှု၊ မယုံကြည်ခြင်းအတွက် အကြီးမားဆုံးသောသွေးဆောင်မှု” ဟုခေါ်သည်။ ဘုရားမဲ့ဝါဒီများနှင့် ဘုရားမဲ့ဝါဒီများသည် သံသယကိုကြဲရန် သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်တည်ရှိမှုကို ငြင်းဆိုရန်အတွက် မကောင်းမှုပြဿနာကို ၎င်းတို့၏အငြင်းအခုံအဖြစ် မကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ မကောင်းမှု၏ ယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုနှင့် ဘုရားသခင်သည် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း (ဘာသာမဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများအရ) သို့မဟုတ် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း (ဘုရားမဲ့ဝါဒီများထံမှ) ဆိုကြသည်။ အောက်ပါဖော်ပြချက်၏ ငြင်းခုံခြင်းကွင်းဆက်သည် ဂရိဒဿနပညာရှင် Epicurus (ဘီစီ ၃၀၀ ခန့်) မှ ဆင်းသက်လာသည်။ ၁၈ ရာစုအကုန်တွင် စကော့တလန် ဒဿနပညာရှင် David Hume မှ သိမ်းယူကာ လူကြိုက်များခဲ့သည်။
အကယ်၍ ဘုရားသခင့်အလိုတော်သည်မကောင်းမှုကိုကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်မတတ်နိုင်လျှင်သူသည်အစွမ်းထက်သောသူမဟုတ်ပါ။ သို့မဟုတ်သူလုပ်နိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်သူ၏အလိုတော်မဟုတ်ပါ။ ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်မနာလိုမှုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ နှစ် ဦး စလုံးသည်မှန်လျှင်သူလုပ်နိုင်။ ၎င်းကိုကာကွယ်လိုသည်။ မကောင်းမှုမှမည်သည့်နေရာမှလာသနည်း။ မတတ်နိုင်၊ မတတ်နိုင်လျှင်၊ ဘုရားသခင်ဟုအဘယ်ကြောင့်ငါတို့ခေါ်ရသနည်း။
Epicurus နှင့် နောက်ပိုင်းတွင် Hume သည် သူ့ပုံစံအတိုင်းမဟုတ်သော ဘုရားသခင်ပုံတစ်ပုံကို ဆွဲခဲ့သည်။ အပြည့်အစုံပြန်ကြားရန် ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တွင် နေရာမရှိပါ (ဓမ္မပညာရှင်တို့က ၎င်းကို သီအိုဒီစီဟုခေါ်သည်)။ သို့သော် ဤအငြင်းအခုံကွင်းဆက်သည် ဘုရားသခင်တည်ရှိမှုကို နောက်ကောက်ချသည့်အငြင်းအခုံဖြစ်ရန်ပင် မနီးစပ်နိုင်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားလိုပါသည်။ ခရစ်ယာန် တောင်းပန်ပညာရှင် အများအပြားက ထောက်ပြသည့်အတိုင်း (တောင်းပန်သူများသည် ၎င်းတို့၏ သိပ္ပံနည်းကျ “တရားမျှတမှု” နှင့် အယူဝါဒဆိုင်ရာ ကာကွယ်ရေးတွင် ပါဝင်နေသော ဓမ္မပညာရှင်) သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မကောင်းမှုပြုခြင်း၏ တည်ရှိမှုသည် ဘုရားသခင်တည်ရှိခြင်းကို ဆန့်ကျင်ခြင်းထက် သာဓကဖြစ်သည်။ အခု ဒီအကြောင်းကို အသေးစိတ်ပြောပြချင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီးတွင်ဆိုးသွမ်းမှု၏ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအဖြစ်ဆိုးသွမ်းမှုကိုတွေ့ရှိခြင်းသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်နတ်ဘုရားများထက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း agnostics နှင့်ဘုရားမဲ့ဝါဒီများကိုကွဲပြားစေသည့်နှစ်ဖက်သန်သောဓားဖြစ်သည်။ မကောင်းမှု၏တည်ရှိမှုသည်ဘုရားသခင်တည်ရှိမှုကိုငြင်းပယ်သည်ဟုငြင်းခုန်ရန်အတွက်ဆိုးသွမ်းမှု၏တည်ရှိမှုကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာမကောင်းမှုကိုမကောင်းသောအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်ထားတဲ့အကြွင်းမဲ့အာဏာကိုယ်ကျင့်တရားဥပဒေရှိရမည်ကြောင်းအောက်ပါအတိုင်း။ မြင့်မားသောကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာဥပဒေကိုမသတ်မှတ်ထားဘဲမကောင်းသောအယူအဆကိုယုတ္တိရှိရှိမဖန်တီးနိုင်ပါ။ ဤသည်ကဤဥပဒေ၏ဇာစ်မြစ်ကိုမေးခွန်းထုတ်သကဲ့သို့ငါတို့ကိုအကြီးအကျယ်အကြပ်အတည်းဖြစ်စေသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင်မကောင်းမှုသည်မကောင်းမှုနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါကအဘယ်အရာသည်ကောင်းသောအရာကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ဆုံးဖြတ်မည်နည်း။ ဤစဉ်းစားသုံးသပ်မှုအတွက်နားလည်မှုသည်မည်သည့်နေရာမှလာသနည်း။
Das 1. မောရှေ၏ကျမ်းက ကျွန်ုပ်တို့အား ဤလောကကို ဖန်ဆင်းခြင်းသည် အကောင်းမဟုတ်ဘဲ အဆိုးဖြစ်ကြောင်း သွန်သင်ထားသည်။ သို့ရာတွင်၊ မကောင်းမှု ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး မကောင်းမှု ဖြစ်ပေါ်လာသည့် လူသားတို့ ပြိုလဲခြင်းကိုလည်း ပြောပြသည်။ မကောင်းမှု ကြောင့် ဤကမ္ဘာသည် ဖြစ်နိုင်သမျှ ကမ္ဘာများထဲတွင် အကောင်းဆုံး မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် မကောင်းမှုပြဿနာသည် "ဖြစ်သင့်သည်" မှ သွေဖည်သွားသည်ကို ဖော်ပြသည်။ သို့သော်လည်း ဖြစ်သင့်သည်အတိုင်း မဖြစ်ပါက ထိုလမ်းကြောင်းရှိရမည်၊ သို့ဖြစ်လျှင် ထိုလိုချင်သော အခြေအနေသို့ ရောက်ရန် အဘိညာဉ် ဒီဇိုင်း၊ အစီအစဥ်နှင့် ရည်ရွယ်ချက် ရှိရမည်။ ဤအစီအစဥ်ကို အစပြုတော်မူသော အဘိညာဉ် (အဘိညာဉ်) ဟူသော ဘုရားဟု ယူဆသည်။ ဘုရားသခင်မရှိလျှင် အရာများဖြစ်သင့်သည်ဟူ၍မရှိပေ၊ အကျိုးဆက်အနေဖြင့် မကောင်းမှုလည်းရှိမည်မဟုတ်ပေ။ ဤအရာအားလုံးသည် အနည်းငယ် ရှုပ်ထွေးသည်ဟု ထင်ရသော်လည်း မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာ ဂရုတစိုက် ဖန်တီးထားတဲ့ ယုတ္တိ ကောက်ချက်တစ်ခုပါ။
CS Lewis ကဤဆင်ခြင်တုံတရားကိုအစွန်းရောက်သည့်အထိယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ခရစ်ယာန်ပါ ၀ င်သောကျွန်ုပ်၏ခွင့်လွှတ်ခြင်းစာအုပ်တွင်သူသည်လောက၌ဆိုးသွမ်းမှု၊ ရက်စက်မှုနှင့်တရားမမျှတမှုများရှိနေခြင်းကြောင့်သူသည်ဘုရားမဲ့ဝါဒီတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးသည်။ သို့သော်သူ၏ဘုရားမဲ့ဝါဒကိုသူပိုမိုတွေးတောလေလေတရားမမျှတမှုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်ပကတိတရားရှုမြင်ချက်ပေါ်တွင်သာမူတည်ကြောင်းသူပိုမိုရှင်းလင်းစွာသဘောပေါက်လာသည်။ လူသားတို့၏အထက်တွင်ရပ်တည်ပြီးဖန်တီးထားသောအဖြစ်မှန်များကိုပုံသွင်းရန်နှင့်၎င်းတွင်ဥပဒေစည်းမျဉ်းများချမှတ်ရန်အခွင့်အာဏာရှိသောတရားမျှတသောသူကိုဥပဒေကသတ်မှတ်ထားသည်။
ထို့အပြင်၊ မကောင်းမှု၏ဇာစ်မြစ်သည် ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ၊ စုံစမ်းသွေးဆောင်မှုကို ပေးဆောင်သော၊ ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်ဘဲ၊ အပြစ်ကိုရွေးချယ်သော သတ္တဝါများအတွက်ဖြစ်ကြောင်း သူအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ လူးဝစ်သည် လူသားများသည် ၎င်းတို့သည် အကောင်းနှင့်အဆိုး၏ရင်းမြစ်ဖြစ်လျှင် ၎င်းတို့သည် ရည်မှန်းချက်မရှိနိုင်ဟုလည်း အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ လူအုပ်စုတစ်စုသည် အခြားသူများကို ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ အဆုံးအဖြတ်ပေးနိုင်သော်လည်း အခြားအုပ်စုသည် ၎င်းတို့၏ အကောင်းနှင့်အဆိုးကို ဆန့်ကျင်နိုင်သည်ဟု ၎င်းက ဆက်လက်သုံးသပ်သည်။ ဒီတော့ မေးစရာရှိတာက၊ ဒီလို ပြိုင်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ အကောင်းနဲ့အဆိုးရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ အခွင့်အာဏာက ဘာလဲ။ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုတွင် တစ်စုံတစ်ရာကို လက်မခံနိုင်ဟု ယူဆသော်လည်း အခြားတစ်ခုတွင် ခွင့်ပြုနိုင်သည့်အခါ ရည်မှန်းချက်စံနှုန်းသည် အဘယ်မှာရှိသနည်း။ ဤအကျပ်အတည်းကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် (ကံမကောင်းစွာဖြင့်) ဘာသာတရား သို့မဟုတ် အခြားသော အယူဝါဒများဖြင့် မကြာခဏ မြင်တွေ့နေရပါသည်။
ကျန်ရှိနေသောအရာမှာဤအရာသည်အမြင့်မြတ်ဆုံးဖန်တီးသူနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာဥပဒေပြုသူမရှိလျှင်ကောင်းကျိုးအတွက်ရည်မှန်းချက်စံနှုန်းလည်းမရှိနိုင်ပါ။ အကယ်၍ ကောင်းမွန်သောစံသတ်မှတ်ချက်မရှိပါကတစ်စုံတစ်ရာသည်ကောင်းလျှင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုမည်သို့ရှာဖွေနိုင်မည်နည်း။ Lewis ကဤဥပမာကိုဤသို့ဖော်ပြခဲ့သည် -“ စကြဝuniverseာတွင်အလင်းမရှိ၊ ထို့ကြောင့်မျက်စိရှိသတ္တဝါများမရှိလျှင်၎င်းသည်မှောင်မိုက်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ဘယ်တော့မျှမသိနိုင်ပါ။ အမှောင်ဟူသောစကားလုံးသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။
မကောင်းမှုကိုဆန့်ကျင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ကောင်းမြတ်သောဘုရားသခင်ရှိမှသာလျှင်မကောင်းမှုကိုစွပ်စွဲခြင်းသို့မဟုတ် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဘုရားသခင်မရှိခဲ့ပါကသူလည်းသူ့အားမလှည့်စားနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းနှင့်အဆိုးဟုခေါ်သည့်အရာများထက် ကျော်လွန်၍ နားလည်မှုအတွက်အခြေခံမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ကောင်းသည်” ဟူသောတံဆိပ်နှင့်ပိုနှစ်သက်သည်ထက် ပို၍ ဘာမှမရှိပါ။ သို့သော်၎င်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး ၏ ဦး စားပေးမှုနှင့်ဆန့်ကျင်ပါက၎င်းသည်“ ဆိုးသည်ဖြစ်စေဆိုးသည်” ဟုကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်လိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စမျိုးတွင်ဓမ္မဓိively္ဌာန်ကျသောမကောင်းမှုဟုခေါ်ဆိုနိုင်သောအရာမရှိ။ အမှန်တကယ်တိုင်ကြားစရာဘာမှမရှိ၊ အမှုအရာသူတို့ကဲ့သို့နည်းတူဖြစ်လိမ့်မည် သူတို့ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ကောင်းမြတ်သောဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မကောင်းမှုကိုမနှစ်သက်ရန်နှင့်၎င်းကိုဖျက်ဆီးရန်“ တစ်စုံတစ်ယောက်” သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည့်အခြေခံအကြောင်းရင်းရှိသည်။ မကောင်းမှု၏တကယ့်ပြproblemနာရှိနေပြီး၎င်းသည်တစ်နေ့တွင်ဖြေရှင်းပြီးသောအရာအားလုံးမှန်တယ်ဟူသောယုံကြည်ချက်သည်ဘုရားသခင်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ကောင်းသောဘုရားသခင်တည်ရှိကြောင်းယုံကြည်ချက်၏ခိုင်မာသောအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။
ဘေးဆိုးရှိသည် - သတင်းကိုသာကြည့်ပါ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဘေးဥပဒ်ကိုတွေ့ပြီ။ ငါတို့မူကား၊ ငါတို့၏ဘုရားသခင်ကျိန်းဝပ်တော်မူမည်ကို၎င်း၊ ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးတုန်းကကျွန်မရဲ့ကျဆုံးခြင်းဟာဘုရားသခင်ကိုမအံ့သြခဲ့ဘူးဆိုတာကိုပါ။ မကောင်းမှုကိုကျော်လွှားရန်သူ၏အစီအစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုခရစ်နှင့်ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးဖြစ်သောကြောင့်သူသည် Plan B ကိုအသုံးမပြုခဲ့ပါ။ ခရစ်တော်၌ဘုရားသခင်သည်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာအားဖြင့်ဆိုးသွမ်းမှုကိုအောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤအစီအစဉ်သည်ကမ္ဘာ၏အစတွင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ သခင်ယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကဆိုးညစ်သောအရာသည်နောက်ဆုံးစကားလုံးမဟုတ်ကြောင်းကိုပြသည်။ ခရစ်တော်၌ဘုရားသခင့်အမှုတော်ဆောင်ခြင်းကြောင့်မကောင်းသောအနာဂတ်မရှိပါ။
အဆိုးမြင်၊ တာဝန်ကျေပွန်သော၊ ယင်းကို တစ်စုံတစ်ခုလုပ်ဆောင်ရန် သန္နိဋ္ဌာန်ပြုသူ၊ အရာရာကို မှန်ကန်စွာ အဆုံးသတ်မည့်သူသည် အဆိုးမြင်သော ဘုရားသခင်ကို သင် တောင့်တပါသလား။ သို့ဖြစ်လျှင် ငါသည် သင်တို့အတွက် သတင်းကောင်းရှိပါသည်၊ ဤသည်မှာ ယေရှုခရစ် ထုတ်ဖော်ခဲ့သော ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် “ဤပစ္စုပ္ပန်ဆိုးညစ်သောကမ္ဘာ” တွင်ရှိသော်လည်း (ဂလာတိ၊ 1,4) ပေါလုရေးခဲ့သည့်အတိုင်း အသက်ရှင်ပါ၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား စွန့်လွတ်တော်မမူ၊ မျှော်လင့်ချက်မရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ကို ချန်ထားတော်မမူပါ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ရှိတော်မူကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အား အာမခံပါသည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ရှိရာနေရာနှင့် ယခု ဤနေရာသို့ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အား “အဦးသီးသောအသီးများ” ကိုရရှိခြင်း၏ကောင်းချီးကိုပေးသည် (ရောမ၊ 8,23) “လာလတ္တံ့သောကမ္ဘာ” (လုကာ ၁8,30)—“ကတိစကား” (ဧဖက် 1,13(၁၄) နိုင်ငံတော်၏ ပြည့်စုံခြင်း၌ စိုးစံတော်မူသည်နှင့်အညီ၊
ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်အားဖြင့် အသင်းတော်၌ အတူတကွ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတစ်လျှောက် ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်၏ နိမိတ်လက္ခဏာများကို ပုံဖော်ထားပါသည်။ ကျိန်းဝပ်နေသော Triune ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အစကတည်းက သူစီစဉ်ထားသည့် မိတ်သဟာယအချို့ကို ယခုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်စေပါသည်။ ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း၌၊ အချင်းချင်း ဝမ်းမြောက်မှု—အဆုံးမသတ်နိုင်သော စစ်မှန်သောအသက်တာနှင့် ဘေးဥပဒ်မဖြစ်ဘဲ ရွှင်လန်းမှု ရှိလိမ့်မည်။ မှန်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ဤဘုန်းကြီးသည့်ဘက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ရုန်းကန်မှုများရှိကြသော်လည်း၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူသည်—ခရစ်တော်၏မေတ္တာတော်အားဖြင့်- ကျွန်ုပ်တို့၌ထာဝရတည်ရှိသည်—နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သိရှိခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့နှစ်သိမ့်မှုရရှိကြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ဆိုသည်– “သင်တို့၌ရှိသောသူသည် လောက၌ရှိသောသူထက် သာ၍ကြီးမြတ်တော်မူ၏။1. ဂျိုဟန် 4,4).